Wiishka Dhismaha, Mashiinka Wiishka, Adeegga Wiishka, Mashiinka Wiishka - XJCM
Craugh Terrain Crane
Is-Toosinta Tower Crane
Qaybo Dhismeed Oo Weyn
Qaab dhismeedka wiishka
Qaybaha dhismaha qoda
Wiish wiishka qaada
XJCM waa shirkad tiknoolajiyad sare oo heer qaran ah oo si xirfadaysan u naqshadeysa, soo saarta oo wax ka qabata wiishka dhulka adag, wiish xamuul ah, wiish munaarad iyo mashiinno kale oo dhisme ah.
Iskiis u dhisaya wiish munaarad ah
Wiish xamuul ah
Wiish dhulka ku adag
Marka lagu daro alaabooyinka waxqabadka sare leh, XJCM waxay bixisaa adeeg caalami ah oo lagu kalsoon yahay. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan kuu oggolaaneyno inaad si ammaan ah oo hufan u shaqeyso - xitaa haddii ay jiraan xaalado aad u daran.
wiish munaaraddii wareega
Nooca XJCM 12 tan wiish xamuul ah oo xamuul xamuul ah
XJCM 80 tan wiish mobile ah oo iib ah
24 tan lakabka biibiile
Nooca XJCM wiish wiishka wiishka
XJCM sumadda 25 tan oo xamuul ah oo wiish lagu iibinayo
30 Ton Wiish mashiinka qaada oo wiishka dhulka ku xeel dheer
XJCM brand Is Loading iyo Dejinta Sanitatio ...
Waxaa la aasaasay 2002, Xuzhou Jiufa Construction Makiinado Co., Ltd (XJCM). waa shirkad saamileyaal ah oo leh raasamaal maalgashi RMB16 milyan. Shirkaddayadu waxay ka kooban tahay aag 53 kun oo mitir murabac ah, 38 kun oo ka mid ahna loogu talagalay aqoon isweydaarsiyo. Waxaan ku qalabeysan nahay in ka badan 260 xarumood oo cusub oo casri ah. Waxaan ku takhasusay soo saarista dhismayaasha waaweyn ee mashiinada dhismaha iyo awooddeena wax soo saar sanadle ah waa 20 kun metrik tan. Mashiinnada teknolojiyada-sare ee xakamaynta lambarrada, alxamida, foorarinta iyo kuleylka ayaa loo adeegsadaa habka wax soo saarkeenna. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee XJCM waa wiish dhul-adag, wiish xamuul ah, wiish munaarad iskeed isu-qabadsiiya, qalab-hawleed badan oo shaqeynaya iyo qaybo badan oo mashiinnada dhismaha ah. Xaqiiqdii waxay yihiin kuwo tayo leh. Noocyadeenna taxanaha ah ee 'RT', wiishka gawaarida gawaarida taxanaha ah ee QY iyo wiishka taxanaha taxanaha ah ee JFYT ayaa loo dhoofiyaa Waqooyiga Ameerika. Koonfurta Ameerika, Afrika, Bariga Dhexe, Galbeedka Aasiya, Koonfur-bari Aasiya iyo in ka badan 30 waddan iyo gobollo.
Wiishka "RT tax off-road crane" oo si madax-bannaan loo baaray oo ay soo saartay shirkaddu waxaa loo aqoonsaday inay tahay "wax soo saar tiknoolajiyad sare leh" Waaxda Sayniska iyo Teknolojiyada ee Gobolka Jiangsu waxayna ku taxnayd "Mashruuca Banaanbaxa Warshadaha ee Mashruuca Warshadaynta Qaranka". ee Sayniska iyo Teknolojiyada.
XJCM waxay ku takhasustay soo saarida dhismooyinka waaweyn ee mashiinada dhismaha.Waxaan siineynaa baaldiyo qoda, baaldiyo rar, gacmo dhagaxa, booms, muraayadaha hore, looxyada gadaal, duub duub iyo alaabooyinka kale ee laxiriira XCMG, CAT, FOTON, LIUGONG, HELI forklift, YUTONG iyo kuwa badan shirkadaha kale ee caanka ku ah mashiinada ee Shiinaha.
XJCM boodboodka loogu talagalay wiishashka
Qaybta dambe ee rarka
XJCM keena Crane boom
XJCM habee All Model Wheel Loader baaldi
Soosaaraha Shiinaha Iibinta 2ton Ilaa 100ton Excava ...
Waan kordhin doonaa oo xoojin doonaa iskaashiga aan leenahay.
Cinwaanka:NO.1 Dapeng Industrial Park, Degmada Tongshan, Xuzhou, Jiangsu, Shiinaha